आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको पर्याप्त प्रमाण भेटियोः सरकारी वकिलको कार्यालय – www.janabato.com
Latest Taja-update समाचार
८ भाद्र २०७६, आईतवार १०:३२ August 25, 2019 Janabato Online
चितवन, भदौ ८ । चितवन सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि लामिछानेसहित तीन जनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको पर्याप्त प्रमाण भेटिएको जनाएकोे छ ।
प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुमा रवि लामिछानेसहित तीन जनाले दुरुत्साहन गरेको पर्याप्त प्रमाण भेटिएको जनाएको हो । गत ३० साउनदेखि तीनै जनालाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।
पाँच/पाँच दिन गरी दुई पटक म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा आइतबार बुझाएको थियो । प्रतिवेदनको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले रविसहित तीन जनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको पर्याप्त प्रमाण भेटिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
चितवन जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा तीनै जनालाई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना माग गरिएको छ ।
मुद्दा दर्ता भएकाले अव थुनछेक बयान लिइनेछ । बयानपछि थुनामै राखेर मुद्दा चलाउने, धरौटी माग्ने वा साधरण तारेखमा छोड्नेबारे बहस हुनेछ । बहसपछि मात्रै अदालतले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।
गत २० साउनमा पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या अगाडि दिएको भिडियो रेकर्डका आधारमा उनीहरुलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
← पाल्पामा भगवतीको रथयात्रा (फोटोफिचर)
चम्किदै राष्ट्रिय खेल भलिबल →
सरसफाई देशको विकास सम्बृद्धि विकास सँग जोडिएकोले निरन्तरता दिर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्य रायमाझी जिकिर
२५ पुष २०७५, बुधबार १३:१३ Janabato Online Comments Off on सरसफाई देशको विकास सम्बृद्धि विकास सँग जोडिएकोले निरन्तरता दिर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्य रायमाझी जिकिर
किन भयो सिरियामाथि आक्रमण ? अमेरिका के चाहन्छ ?
१५ फाल्गुन २०७४, मंगलवार ०३:०१ Janabato Online Comments Off on किन भयो सिरियामाथि आक्रमण ? अमेरिका के चाहन्छ ?